« Hodi-janak’ondry… » -
AccueilTresaka« Hodi-janak’ondry… »
« Hodi-janak’ondry… »
29/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Niara-nahita angamba isika fa niseho ho olon-kendry avokoa ry Rajoelina mianakavy omaly tetsy amin’ny CENI. Tahaka ireny hoe olona manana toetra miavaka, mihaja ary matotra sy manana fahamendrehana. Ireny fihetsika nataon-dry Rajoelina sy ny firongony ireny no fanaon’ny ambodia mitafy hodi-janak’ondry ho an’izay tsy mahalala. Tsotra ny antony: fantatr’izy ireo tsara fa hosoka sy hala-bato no tao ambadik’ilay hoe “fandresena”.
Miami sy “building” no fampanantenan’i Andry Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra nandritra iny fifidianana iny, saingy nohadinoiny fa tsy mateza ary mora mirodana ny trano naorina tamin’ny alalan’ny simenitra sy vy sandoka, tahaka ny fanjakana azo tamin’ny alalan’ny hosoka sy fampiasana hosoka ary ny hala-bato. Tsy hitondra azy ireo lavitra io fahefana azo avy tamin’ny tsy marina io, tahaka ny manorina trano eo ambony fasika.
Tsy maintsy hiseho ihany koa ny tena endrik’izany fanjakana naorina tamin’ny tsy marina izany rehefa miala io hodi-janak’ondry io. Inona moa no tanjon’i Andry Rajoelina sy ny firongony amin’io mody tsy miteny io? Tsy noho ilay hosoka sy hala-bato loatra fa te hiseho amin’ny olona sy ny vahiny mpanara-maso ny toe-draharaha eto amintsika hoe “manana fahamendrehana raha mihoatra amin’i Marc Ravalomanana sy ny mpomba azy”. Te hampiseho hoe mendrika azy ireo tokoa ny ho mpandresy, ary izay no tena ilàna fitandremana ‘ndrao mahomby tokoa io teti-dratsin’ny ambodia mitafy hodi-janak’ondry io.
Efa misy mihitsy amin’izao fotoana izao, fizarana “tee-shirt” Marc Ravalomanana any ambadika any kanefa tsy mpomba an-dRavalomanana. Izany hoe, mety hisy hanakorontana sy hanimba zavatra androany sabotsy mba ahafahana miampanga ny kandidà 25 sy ny mpiara-dia aminy ho tompon’antoka amin’izany. Efa mahazatra io fomba io e! Efa mahazatra kanefa mila mailo ‘ndrao mahomby tahaka ny zava-nitranga teto hatramin’izay.
Izay no ilazana eto androany hoe tsy tokony ho variandriana na mandrimandry manana aretina, satria miasa any ambadika any ny ambodia mitafy hodi-janak’ondry!